Best CySEC Regulated Brokas Machị 2021 | Full Mụta 2 Trade Guide
Best CySEC Broka 2021- Mụta ahia 2
N'ụwa niile, e nwere ọtụtụ puku ndị na-ere ahịa n'ịntanetị, nke ọ bụla na-enye ọrụ ha nye ọbụna ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-etinye ego. Nsogbu bụ na enwere ndị na-echegbu onwe ha nke ndị scammers nọ ebe ahụ na-eche ịdọpụ ndị ahịa na-amaghị.
Site na ịhọrọ onye na-ere ahịa zuru oke, dị ka CySEC Broker, ị na-emepụta ụgbụ nchekwa maka onwe gị na isi obodo gị. Ndị ahịa nwere ike idafu ego mgbe ha na-etinye ego, nke a ga-atụ anya na egwuregwu a. Ma mgbe ọ na-abịa ịhọrọ a ore, ọ dị mkpa ịhọrọ otu nwere ikikere zuru oke.
CySEC na-agbaso iwu niile nke MiFID setịpụrụ (Ahịa na Ntuziaka Ngwaọrụ Ego). Enweghị iwu MiFID, ndị ahịa agaghị echekwa site na ihe dịka ịkwụ ụgwọ ndị na-eyi ọha egwu, wayo amata, ịchụ ego na izu ohi.
Na ibe a, anyị ga-agafe ihe niile dị mkpa ị ga-echebara mgbe ị na-achọ onye na-ere ahịa CySEC iji zụọ ahịa. Anyị ekpuchila ihe niile site na ihe usoro iwu na-eme n'ezie na ihe ị nwere ike ịzụ ahịa site na ụdị onye na-ere ahịa. Na mmechi, anyị ga-atụle nke kacha mma CySEC broka nke 2021.
Gịnị bụ CySEC?
CySEC na-anọchite anya 'Cyprus Securities and Exchange Commission' ma bụrụkwa nke izizi nchịkwa iwu nke ngalaba na-ahụ maka ịntanetị. Organizationtù nhazi a na-adabere na Saịprọs ma na-akpali mmasị - bụ nnukwu ụlọ ọrụ gọọmentị maka ọnụọgụ abụọ nhọrọ na Forex ndị na-ere ahịa. N’ezie enwere otutu ndi n’ebi ahia na ntanetị ịntanetị nke ndi aru a nyere ikike.
N’afọ 2004, Republic of Cyprus sonyeere EU. Dika odi, ihe malitere igbanwe maka ahia ego. Na 2008, ndị nzuko omeiwu Europe gosipụtara MiFID na nkwekọrịta iji mekọrịta ụkpụrụ ndị na-achịkwa ohere ọrụ ego na kọntinent ahụ. Nke a kwekọrịtara ndị niile na-eweta ọrụ ego wee setịpụ ụkpụrụ ga-agbaso.
Might nwere ike ịchọpụtala na ụfọdụ ndị na-ere ahịa n'ịntanetị nwere ikikere site na CySEC na FCA (Financial Conduct Authority), ebe ụfọdụ debara aha ha na otu ma ọ bụ nke ọzọ. Dị ka FCA, CySEC bụ ọrụ maka inye ndị otu ụlọ ọrụ na-ere ahịa ikikere. Ahụ a nwekwara ikike ịkwado na inye ntaramahụhụ ọ bụla na-anaghị agbaso iwu.
A na-achịkwa azụmahịa ọ bụla nke onye na-ere ahịa CySEC rụrụ zuru oke, gụnyere nkwụsị ọ bụla na nkwụnye ego n'etiti ndị na-etinye ego na ụlọ ọrụ na-ere ahịa. Ndị na-ere ahịa CySEC ga-edozi nyocha kwa afọ, mana karịa na nke ahụ.
Ebumnuche bụ isi nke CySEC bụ imepụta ahịa azụmaahịa zuru oke maka onye ọ bụla. Isi a na-elekwasị anya na ahịa dị iche iche dịka Forex, CFDs, na OTC (n'elu counter) ahia.
Ọnọdụ dị a doaa ka ndị Brokas na-ezute maka Nkwado CySEC?
Maka ndị na-ere ahịa CySEC, inweta akwụkwọ ikike adịghị mfe. A sị ka e kwuwe, enwere ọtụtụ ụkpụrụ nduzi ị ga-agbaso. Nke a bụ nnukwu akụkọ ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-azụ ahịa, n'ihi na ị ga-amata na onye na-ere ahịa ikikere nwere igosipụta ịdị mkpa ha na izi ezi ha tupu ha ewere ndị ahịa.
Bodytù a na-achịkwa na-achọ ma ọ dịkarịa ala ndị nduzi abụọ ka ha na-elekọta ụlọ ọrụ na-ere ahịa. Nakwa nke ahụ, achọrọ ndị na-ere ahịa CySEC ka ha kpọtụrụ onye na-achịkwa ma ọ bụrụ na ọ bu n'obi ịnye ọrụ ndị ọzọ.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a ga-enyocha ma dozie akụkụ ọ bụla nke onye na-ere ahịa na nzuzo tupu enye ya dị ka ngwaahịa nye ọha na eze. Anyị kwesịkwara iburu n’uche na-akwadoghị otu onye n’onwe ya ka ọ bụrụ onye nchịkwa nke ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe. Nke a na-agbakwunye nchebe ọzọ na izi ezi nke azụmahịa.
Ndị na-ere ahịa ikikere ga-edozi atụmatụ ha kpọmkwem nye ndị na-enye ikikere gụnyere akaụntụ zuru ezu banyere ọrụ ego niile ụlọ ọrụ ahụ na-ezube ire.
AML bu okwu achoro maka 'mgbochi ego gha,' ebe ebe CFT di mkpụmkpụ maka 'Iguzogide Ego nke Iyi ọha egwu'. Ihe abụọ a mejupụtara otu ngalaba na ngalaba a nwere ọrụ maka ịlebe nrube isi nke CySEC.
Nke a pụtara na ndị na-ere ahịa CySEC ga-agabiga usoro KYC (Mara Onye Ahịa Gị) yana ndị ahịa ọ bụla debanyere aha. Maka nke a na-amaghị, nke a bụ ịnweta njirimara foto, aha zuru oke na adreesị ebe obibi, yana ọbụlagodi ọnọdụ ego na ahịa nke onye ahịa. Otu iwu a na-emetụta gafee osisi - yabụ na ọ nweghị ihe ị bụ, ị ga-egosirịrị njirimara gị tupu ihe ọ bụla azụmaahịa CySEC nwere ike ịdenye aha gị maka akaụntụ.
Ọ bụrụ na onye na-ere ahịa CySEC ga-ahụ ihe ọ bụla na-enyo enyo dịka ịgha ụgha ego, ịchụ ego, ịkwụ ụgwọ ndị na-eyi ọha egwu, wayo njirimara; ma ọ bụ ọbụlagodi naanị onye ahịa na-etinye ego na - enweghị atụ - ha ga-enyerịrị onye nchịkwa ahụ ihe ha chọpụtara.
A choro ka ndi oru a gosiputa nghota di nkpa nke imeputa 'ihe omuma banyere onye ahia' maka onye ahia obula. Nke a bụ na mgbakwunye na ịme ndenye ego mgbe niile na ndị ahịa.
Achọrọ ndị na-ere ahịa CySEC niile ka ha kwụọ ụgwọ niile ndị ahịa ga-akwụ, yana nghọta zuru oke. Companylọ ọrụ ahụ ga-enwerịrị 'ọkwa ozi' ruru eru, nke na-edepụta nkọwapụta nke ọma mgbe na otu esi akwụ ụgwọ ụlọ ọrụ ndị na-ere ahịa na CySEC. Nke a bụkarị okwu gbasara CFDs
Akụkụ ọzọ nke nkwupụta ihe egwu bụ 'nkwenye ndị ahịa'. N’aha nghọta na nghọta nke ihe akọwara, achọrọ ndị ahịa ka ha dejupụta fọm nkwenye. Nke a dị mkpa iji gosi na onye nyocha CySEC nyere 'ọkwa ozi' ahụ, onye ahịa ahụ ghọtara ya.
Ọnọdụ ọzọ maka ndị na-ere ahịa CySEC iji zute mgbe ị na-achọ maka ikike bụ nyocha na ntinye akwụkwọ nke akụkọ kwa afọ. Nkwupụta a na-edekarị na-achọ itinye akwụkwọ site na June 30th na nke kachasị ọhụrụ kwa afọ site na ọrụ a.
Onye ọ bụla na-ere ahịa na-akọwapụta ihe ọmụma dị ka mgbanwe zuru ezu, ihe akaebe nke ụgwọ a na-akwụ kwa afọ na-akwụ CySEC, mpịakọta ahịa, na usoro ịkwụ ụgwọ kwa afọ. Nke a bụ nyocha zuru oke, yabụ ọtụtụ ndị na-enye ọrụ ego na-eweta ndị nyocha nke atọ iji nyere aka. Nyochaa bipụtara ga-enwerịrị isi obodo na akụ niile nke ụlọ ọrụ ahụ.
N'oge na-adịbeghị anya n'okpuru iwu ọhụrụ etinyere na 2018, kọmịshọn ahụ na-ekwu na ụlọ ọrụ ego niile kwesịrị ịnye onye ọ bụla nkọwa zuru ezu. Nke a gụnyere; akpan owo sub-klas mpịakọta, niile trades rụrụ na afọ, nakwa dị ka nke ndị ahịa bụ ọkachamara investors na retail ahịa wdg.
Akuko aghaghi igunye oke ahia akụkọ na ihe eji eme ihe. Ndị na-ere ahịa ga-amata ọdịiche dị n'etiti ahịa ahịa nke ndị ahịa mere, na ndị nke onye na-ere ahịa gburu n'ihi onye ahịa ahụ.
Ọ bụrụ na ahapụ ozi ọ bụla na nyocha ndị a na-eme kwa afọ, a ga-akụ onye na-ere ahịa CySEC ụgwọ nke ọma, ma ọ bụ ka njọ - kagbuo ikike ya.
Nkewa nke ụlọ akụ, oge ụfọdụ a na-akpọ nkewa ego, abụghị ihe ọhụụ - ọkachasị na mpaghara ọrụ ọrụ ego. Maka CySEC, iwu a malitere naanị na 2017. Iwu ahụ na-ekwu ugbu a na ụlọ ọrụ ntinye ego ọ bụla nke na-ejide isi obodo nke ndị ahịa ya ga-echekwa ego ndị ahịa, pụọ na nke ya.
E wezụga nke a, ha ga-ahụkwa na etinyeghị ego akaụntụ gị na nke ya (maka ụgwọ wdg). Mkpebi ahụ na-echebekwa ozi gbasara gị onwe gị ka ị ghara ịdaba n'aka ndị ọjọọ.
Dabere na CySEC, ndị na-ere ahịa ahịa 'ga-ekewapụ ego' opekata mpe nkeji 3 maka mpaghara 1,000 ọ bụla onye ahịa na-edebe. Nke a kwesịrị ịbụ na a kpamkpam iche na akaụntụ na nke ore ahia ike. Site n'ime nke a, ị ga - ejide n'aka na ọ bụrụ na onye na - ere ahịa adịghị enwe nsogbu ịga ahịa, ego gị enweghị nsogbu.
Ekwesịrị ikwu na mgbe FCA na-enye ndị ahịa ego ịkwụ ụgwọ ihe ruru ,85,000 20,000, CySEC ga-akwụ ụgwọ naanị € XNUMX. Nke a ka mma karịa ihe ọ bụla, mana anyị ga-abanye ntakịrị na nke ahụ n'oge na-adịghị anya.
Inwe nlezianya siri ike dị oké mkpa maka ndị na-ere ahịa CySEC. Nke a gụnyere nlele anya zuru ezu banyere ndị ahịa ọhụụ, gụnyere ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ekwesịrị itinye usoro mbanye siri ike ruru na ntọala nke onye na-ere ahịa. Ndị na-ere ahịa CySEC na-enyocha mgbe niile. A sị ka e kwuwe, ahụ ndị na-achịkwa dị ka ndị na-eche nche - yabụ ha kwesịrị ịgba ọsọ ụgbọ mmiri siri ike. N'ihi ya - a ga-enyocha ihe ndekọ ego niile nke ọma.
Anyị kwuburu na ọ bụrụ na onye ahịa etinye ego buru ibu na mberede, onye na-ere ahịa ga-ekwupụta ya. Na mgbakwunye na nke a, ọ dịkwa ha mkpa ịme akụkọ zuru oke. Akuko a aghaghi itinye ihe nchoputa obula dika ebe esi enweta ego.
Ọzọkwa, nke a bụ akụkụ nke mgbochi nke mpụ ego na mpụga ego n'ime oghere ego, nke bụ nnukwu nsogbu ka ukwuu tupu iwu siri ike wee bụrụ ụkpụrụ.
E nwere oge mgbe ikpo okwu nke onye na-ere ahịa nwere ike inye ndị na-etinye ego ihe dịka 1: 1000 leverage na trades. Obere pasent nke ndị ahịa nwere nnukwu ụlọ akụ nwere ike inye ụdị ihe egwu ahụ. Mana, maka ọtụtụ mmadụ, ọ na-abụ ihe na-anwa anwa anwa ngwa ngwa ma ọ nwere ike ibute na ọdachi.
Ọbụghị naanị na leverage dị elu ga-ekpochapụ akaụntụ gị ngwa ngwa mana pọtụfoliyo gị nwere ike ịbụ nke mebiri emebi. Oge ndị ahụ agafeela, ọ bụghị opekata mpe n'ihi na CySEC etinyelarị mmachi mmachi na ndị na-enye ọrụ ego, dịka iwu ESMA si dị.
Dịka onye ahịa azụmaahịa, nke a pụtara na ị ga - ejide gị site na njedebe leverage dabere na ngwongwo ndị a:
Isi ego abụọ - 30: 1
Nnukwu ihe omimi, nke abụọ na-abụghị isi ego, ọla edo - 20: 1
Commodities (ewepu na-abụghị ndị isi equities na gold) - 10: 1
Referencekpụrụ ndị ọzọ na-ekwu okwu na otu onye - 5: 1
Ego - 2: 1
N'ezie, na leverage, ị nwere ọtụtụ ihe ga-efunahụ gị. Mana, n'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ọ gafee nke gị, ị nwere ike iguzo iji nweta ọtụtụ. Ihe dị mkpa bụ naanị itinye aka na ntinye nke mmefu ego gị.
Kedu ihe ‌Protections‌ ‌ Na-eme ‌CySEC‌ ff na-enye? ‌
The'Investor Akwụ ụgwọ Fund ', ma ọ bụ ICF maka obere, e hiwere na 2004 na-achịkwa CySEC. All CySEC agbanwe na-na iwu ụgwọ isonye na ICF na dị ka a N'ihi ya, gị na akaụntụ na-echebe ruo ma € 20,000 ‌ ma ọ bụ ‌90% ‌of‌ assamassed ‌ kpuchie‌ nkwupụta.
So‌ ‌for‌ ‌he Nlereanya - Ka anyị kwuo na ‌you‌ ‌hold‌ € € 60,000‌ ‌nweta ‌a‌ yCySEC‌ roBroker‌ na ‌nwuru ‌that‌ ‌broker‌ ‌goes‌ ‌‌‌‌‌inessinessinessinessiness‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌iness‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌FFFFFFFFF‌‌‌‌‌‌‌‌ €‌nweta € € 4,500‌ ‌ (90%).
Ma ‌CySEC‌ na ‌the FCA‌ ‌are‌ ‌also‌ ‌ruled‌ ‌by‌ ‌ESMA‌ ‌ (European‌ ‌Securities‌ ‌and‌ ‌Markets‌ ‌Authority), ‌ ‌kedu nke a ‌‌‌‌ n'eziena-anabata ‌ Y’oburu n’acho imata udiri ikike itinye ikike n’ebe ihe gi di karie, i gha ahu otutu ihe edetu n’elu peeji a.
Gịnị ‌Assets‌ ‌do‌ ‌CySEC‌ roBrokers‌ ‌Allow‌ ‌you‌ ‌to‌ ‌Trade? ‌ ‌
Onweghi CySEC‌ ‌Brokers bụ otu, yabụ ebe ụfọdụ nwere ike itinye uche na sọọsọ, ndị ọzọ na-enye klaasị akụnụba niile a pụrụ ichetụ n'echiche. N’iburu nke a n’uche, anyị etinyela ndepụta nke ihe akachasị ahụkarị nke ndị na-ere ahịa CySEC na-enye.
Mgbanwe mba ọzọ bụ ahịa kachasị mmiri mmiri na mbara ala. Maka nke a, ị ga - ahụ na ọtụtụ CySEC‌ ‌brokers na-enye Forex trading. Iji nweta ahịa a zuru ụwa ọnụ, ịkwesịrị ịbanye na ụlọ ọrụ na-ere ahịa ka ịmalite itinye iwu.
N'ime nke a, ị nwere ike zụọ ahịa ego abụọ dịka EUR / USD ma ọ bụ GBP / USD - awa 24 kwa ụbọchị, ụbọchị asaa n'izu. A bịa n'ụkwụ ego abụọ, e nwere ụdị atọ dị iche iche; majors, umuaka, na exotics.
N'okpuru ebe a bụ nkọwa dị nkenke nke ọ bụla (ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ na Forex).
Minor ụzọ abụọ: Withinfọdụ n'ime obodo na-azụ ahịa na-akpọ obere ụzọ abụọ 'cross-currency' ụzọ abụọ. Otu njirimara nke ụzọ abụọ a bụ na ha anaghị etinye dollar US. Examplesfọdụ ihe atụ gụnyere EUR / GBP, GBP / JPY na CHF / JPY (ịkpọ aha ole na ole)
Isi ụzọ abụọ: Isi ụzọ abụọ bụ ndị kasị elu na-achọ na ya mere ndị kasị mmiri mmiri. Ihe omuma atu gunyere AUD / USD, EUR / USD, na GBP / USD (enwere otutu ihe). Enwere ike ịmekọrịta ụzọ abụọ a n'oge ọ bụla n'ahịa ahịa ahịa na ọtụtụ oge karịa na anaghị abịa na mgbasa dị ala.
Oticzọ abụọ A naghị ere ụdị ụzọ abụọ a dị ka oge abụọ ndị ọzọ ahụ ekwuru - yabụ ga-abịa nke ka elu mgbasa. Otickpụrụ abụọ dị iche iche gụnyere; GBP / ZAR, EUR / TRY na USD / HKD (enwere ọtụtụ ihe ịhọrọ site na)
Cyfọdụ CySEC‌ Forex ‌brokers dị mma karịa ndị ọzọ, ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị na ya mgbe niile ịnwale ma chọta onye na-ere ahịa nwere ọtụtụ agụmakwụkwọ, yana ọtụtụ ihe ngosipụta teknụzụ. Ha abụọ dị mkpa iji nwee ihe ịga nke ọma na ahịa FX.
Nkwekọrịta maka ‌‌dịdị ‌ (CFDs) ‌‌
CFDs bụ ụzọ ị ga - esi gbalịa ma kpebie ijegharị ụdị ngwa dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ego, ebuka, indices ma ọ bụ ngwaahịa. Ka anyị were ya na ikwere na ọnụahịa ahịa na-arị elu. Na nke a dịruru ná njọ, ị ga- 'gaa ogologo' ma ọ bụ 'ịzụta'.
Ma ọ bụrụ na, ị chere na ọnụahịa ahịa ga-agbada na uru, ị nwere ike 'ịga mkpụmkpụ' ma ọ bụ 'ree'. Kedu ụzọ ọ bụla, ndị ahịa CFD enweghị akụ na ụba. Agbanyeghị, ndị CFD na - enye gị ohere ịtinye ọnụ ahịa ego nke ụlọ ọrụ (dịka ọmụmaatụ Apple) na ezigbo oge. Nke a pụtara na dịka onye ahịa ị nwere ike irite uru site na mmegharị ọnụahịa.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ nweghị ọrụ ebubo na CFDs na ndị ahịa nwere ike ịnweta ohere iji nweta ego - n'ime njedebe ESMA a tụlere na mbụ.
Ngwaahịa na-emeghe 24 awa n'ụbọchị, ụbọchị asaa n'izu. A na-ahụta azụmaahịa na-adọrọ mmasị nke ndị ahịa na-achọ volatility. N'ezie, ụfọdụ ndị na-achụ ego oge niile na-ahọrọ naanị azụmaahịa a.
Enwere ike kewaa ngwa a gaa otu dị iche iche, mana iji mee ka ihe dịrị anyị mfe, anyị ga-edepụta ha ụzọ abụọ - 'ngwaahịa siri ike' na 'ngwaahịa dị nro':
Ngwa ahịa siri ike bụ ndị a:
Aluminom, ọla kọpa, ọlaọcha, ọlaedo, palladium
Ndu, tin, zinc, nickel, platinum
Mmanụ, mmanụ gas, mmanụ ọkụ,
Mmanụ a na-ejighị mmanụ, mmanụ gas
Ngwaahịa dị nro bụ ndị a:
Ọka bali, nkpuru, osikapa, oka
Soybean mmanụ, canola
Ajị anụ, owu, roba
Odi ezi, ehi di ndu
Leverage‌ ‌limits‌ ‌are‌ ‌in‌ ‌ ebe on commodities, ‌as‌ ‌set‌ ‌by‌ ‌ESMA‌ gukpụrụ na-esochi na niile CySEC‌ agbanwe. Dị ka ihe atụ, ‌ ‌‌‌‌‌‌ urrent ugbu a‌ ‌ na-eguzogide ‌nke ‌1: 20‌ maka ‌ọlaedo‌ na ‌ 1: 10 ‌ ma ọ bụrụ na ọzọ bụ ọrụ
Investkwụnye ego na ịzụ ahịa na ngwa ahịa nwere ike ibido pọtụfoliyo gị n'ezie. Mgbe ị kwuchara nke ahụ, ọ dị ezigbo mkpa inwe ezigbo nghọta ka otu ahịa si arụ ọrụ tupu itinye onwe gị, yana usoro mmefu ego gị.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, share na-emekọ na-enyere ndị ahịa aka ịzụta na ire mbak na azụmaahịa na ụlọ ọrụ (chere Nike ma ọ bụ Facebook). E depụtara ụlọ ọrụ niile dị maka itinye ego na ya n'ihu ọha, nke pụtara na ị nwere ike ree mbak gị na mgbanwe ahụ.
Na-ejedebeghị na dị nnọọ ịzụ 1 ngwaahịa, ma ọ bụ na ị ga-azụ a dum otu. Banyere nke abụọ, nke a bụ n'ihi na ụfọdụ ndị na-ere ahịa CySec na - enye gị ohere itinye aka na 'ị nweta nkewa'. Dị ka aha ahụ na-egosi, nke a pụtara na ị nwere ike ịzụta 'mkpụrụ' nke oke.
E nwere ụdị isi atọ nke ndị na-ere ahịa na oghere a ma ha bụ ndị a:
Igbu Broker - Ihe ngosi dị na aha ya na nke a. Brodị ụdị nke a na-ere ahịa bụ imezu iwu dịka enyere ya iwu ị, na-enweghị nnyonye anya ma ọ bụ ndụmọdụ.
Onye na-agba Ndụmọdụ - Typedị onye na-ere ahịa CySEC a ga - adụ gị ọdụ na mbak ọ bụla ịnwere ike ị nweta, ma ọ bụ nwee ike ịdị mma maka pọtụfoliyo gị. Ma ị na-azụ ma ọ bụ na ị gaghị ere bụ oku gị.
Onye nwere uche - Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụ ahịa na ahịa na-agabiga oke, mgbe ahụ onye nwere uche nwere ike ịbụ ihe ị na-achọ. Firmdị ụlọ ọrụ brokerage a ga-emere gị mkpebi mkpebi niile, yana ọrụ njedebe ga-akwụsị ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Ma cheta, mgbe ọ na-abịa maka ndị nwere uche, ndị ọrụ niile ga-abịa ụgwọ ọzọ. Ya mere nyochaa mgbe niile usoro na ọnọdụ yana ụgwọ a tụrụ anya ya.
Echiche bụ isi nke ịzụ ahịa akụrụngwa a bụ ịkọ mmegharị ọnụahịa nke mgbanwe ngwaahịa sara mbara. Ihe dị iche n'etiti nke a na akụ ndị ọzọ, dịka ebuka, bụ na ndị na-achụ ego enweghị ike ịzụta akụ ahụ n'onwe ya. A na-ekenye Indices ọrụ na nsuso ngagharị nke ọtụtụ mbak na-arụ ọrụ n'otu mgbanwe.
A na-eji ihe atụ atụ ihe site na iji akara karịa paụnd ma ọ bụ dollar. Ọzọkwa, a ghaghị ịzụ ha site na CFDs, ọdịnihu ma ọ bụ ETFs. Ndị na-ere ahịa CySEC na-enyekarị nkwado na isi ihe dị ka FTSE 100, NASDAQ 100, na Dow Jones 30.
Cryptocurrencies na-enweta nnukwu nlebara anya na afọ ndị na - adịbeghị anya, yana Bitcoin bụ ego kachasị ama nke ụdị a. Iji zụọ ahịa na cryptocurrencies, ịkwesịrị ịkọwa ụzọ maka ịrị elu ma ọ bụ ọdịda nke otu ụzọ. N'echiche a, nke a na-arụ ọrụ dịka Forex.
Ka o sina dị, cryptocurrencies bụ akụ ọzọ na-ere ahịa nke anaghị achọ ịnweta. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta mkpụrụ ego ahụ, ịnwere ike ịzụta ha n'aka onye na-ere ahịa dị ka eToro.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime cryptocurrencies kachasị ewu ewu nke ndị na-ere ahịa CySEC na-enye gị ohere ịzụ ahịa:
Tupu ịmalite ahia cryptocurrencies na akaụntụ CySEC, ọ na-atụ aro ka ị nwaa ngosi ma ọ bụ nnwale iji hụ etu ogige ahụ si arụ ọrụ yana ụdị ego kachasị adabara gị.
Etu esi achọta ndị na-ere ahịa CySEC kacha mma?
N'ihe ize ndụ nke ịkọwa ihe doro anya, ọ bụ n'ezie ihe kachasị mkpa na ị ga-amalite site na onye na-ere ahịa nke onye na-achịkwa iwu nyere ikikere - dịka CySEC.
Nke a na-achota na ị nwere ike ịtụkwasị ụlọ ọrụ obi kpamkpam na ọ bụghị naanị gị ego - kamakwa ozi nkeonwe gị. Ghara ikwu, site na ndị na-ere ahịa CySEC ego gị na-echekwa site na iche nke ego, na mgbakwunye na ịkwụ ụgwọ ruo 20,000 (ma ọ bụ 90% nke akaụntụ gị, nke ọ bụla pere mpe).
Enwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa na ntanetị - yabụ o nwere ike isi ike ịmata ebe ị ga-amalite. N'iburu nke a n'uche, anyị ejirila ndepụta nke ụfọdụ metrik dị mkpa iji tụlee na ọchụchọ gị maka onye na-ere ahịa CySEC
Gwọ ndị na-akwụ ụgwọ na ndị na-ere ahịa nwere ike ịdị iche iche, yabụ na ọ dị mkpa ka ị mee nyocha iji tulee yana iche. Platformsfọdụ nyiwe enweghị ụgwọ ụgwọ ọrụ ọ bụla (dị ka eToro), ebe ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ pasent akara na iwu ọ bụla emere.
Enwela nkụda mmụọ ma ọ bụrụ na ị ga-akwụ ụgwọ ego, dịka ọtụtụ ụlọ ọrụ nnukwu ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ ọrụ iji kpuchie ọnụ ahịa nke ịnye ọrụ ka mma. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-ere ahịa EUR / USD na onye na-ere ahịa gị na-akwụ ụgwọ ọrụ 0.4%. Ọzọ, itinye ego £ 1k na ụzọ ego ahụ. Na nke a dịruru ná njọ, ị ga-akwụ gị ore £ 4 na ọrụ ụgwọ.
Gbasa dị ezigbo mkpa mgbe ị na-ere ahịa n'ịntanetị. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ bụ ọdịiche dị n'etiti ọnụahịa ịzụ ahịa na ire ere nke ihe onwunwe (tụrụ ya na pips).
Iji maa atụ, ka anyị chee na ‘mgbasa’ nke EUR / USD bụ pips 3. Dị ka ndị dị otú a, ị ga-achọ ịbawanye ego ahụ site na 3 pips naanị iji mebie.
Ndị ahịa oge a ga - eji ngwa ọrụ na ọrụ dị iche iche nyere ha aka ịkọwa nke ọma ụzọ akụnụba nwere ike ịkwaga. Nke a na-achota na ha nwere ike ime atụmatụ ahụ ha bu n'uche.
N'iburu nke a n'uche, ụfọdụ n'ime usoro metrik kachasị mkpa ịchọrọ iji lezie anya mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa CySEC bụ:
Iwu igbu ọsọ - Ndị na-ere ahịa CySEC kachasị mma nwere ike ịme iwu na obere oge ọ bụla. Mgbe ụfọdụ, enwere ike ịme nke a na milliseconds. Usoro a dabere n'ụdị akaụntụ na usoro atụmatụ ahia eji eme ihe, ọ bụghị ịkọwa uche ọnụahịa.
Akpaghị aka trading - Fọdụ ndị na-ere ahịa CySEC na-akwado sọftụwia akpaaka dịka ndị ndụmọdụ ọkachamara atọ.
Akụkọ ihe mere eme na ndụ - Ha na - ekwu na ụdị ọnụahịa na - abịaghachi. Fọdụ ndị ahịa na-a swearụ iyi site n'ịmụ data ọnụahịa nke akụkọ ihe mere eme iji kwuo amụma nke ahịa. Ngwaọrụ a dị mkpa mgbe ị na-emeghachi nyocha na nyocha teknụzụ dịka akụkụ nke atụmatụ ka ukwuu.
Chaatị na egosi - Ihe nchoputa nka na ụzụ na-egosi ndị ahịa ihe mmetụta ahịa bụ site na iji chaatị ọnụahịa nke ụdị dị iche iche. Hụ okpuru.
Dị ka anyị kwurula, itinye ihe ngosipụta na teknụzụ ọnụahịa bụ ụzọ dị mma iji soro ihe na-eme n'ahịa.
Fọdụ n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu nke ndị ahịa na-eji bụ:
The internet na-jam-juru n'ọnụ na muta ego na-akọwa otú onye ọ bụla oru egosi na-arụ ọrụ, na i nwere ike iji ha gị uru.
Tupu i tinye aka na CySEC broker, ọ dị nkpa ịmara ụdị akụ dịnụ maka gị. I nwere ike inwe mmasị na ịzụ ahịa cryptocurrencies ugbu a, ma emesịa gbadaa ala ahụ, ị ​​nwere ike ịchọ ịmepụta pọtụfoliyo azụmahịa gị wee gbakwunye klas ndị ọzọ na ndepụta gị.
Ọ bụrụ n ’ị gbadoro anya na azụmaahịa azụmaahịa, yabụ ọ dị ezigbo mkpa ịlele ụdị ụzọ ego dị na saịtị ị na-achọ. Ihe kpatara ya bụ, ụfọdụ nyiwe gosipụtara naanị ụzọ abụọ ego dị iche iche ebe ndị ọzọ na-enye ihe karịrị otu narị.
Chọta onwe gị ụlọ ọrụ CySEC nke nwere ọtụtụ klaasị akụ na ụba na-egbochi mkpa ịmepe akaụntụ na ọtụtụ nyiwe. E kwuwerị, na ihe atụ ị na-agbanwe usoro nhazi gị, ị nwere ihe niile n'okpuru otu ụlọ.
Usoro nkwụnye ego na iwepu ego dị iche n'etiti nyiwe nke CySEC. Imirikiti na-enye nhọrọ nkwụnye ego yiri nke ahụ, mana ọ bụrụ na ịchọrọ itinye ego site na iji otu usoro ị kwesịrị ịlele na ọ na-anabata ya.
Ndị na-ere ahịa CySEC kachasị mma na-arụ ọrụ iwepụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo, ma ọ bụ opekata mpe n'ime oge ole na ole. N'ikwu ya, nke a nwere ike ịdị iche dabere na ikpo okwu ị na-eji. Ndị ụlọ ọrụ na-ere ahịa aha ọma niile ga-ekwupụta nkwụnye ego na usoro iwepu usoro na usoro nke weebụsaịtị ahụ.
Biko mara na oge ịkwụ ụgwọ iji ruo akaụntụ gị nwekwara ike ịdabere na usoro ịkwụ ụgwọ ị kpebiri iji. Ihe atụ zuru oke nke nke a bụ nnyefe ụlọ akụ waya, nke nwere ike were otu izu. O doro anya na nke a adịghị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ịzụ ahịa ozugbo.
Ọkwa ọrụ ndị ahịa nke ụlọ ọrụ ọ bụla nyere dị ezigbo mkpa, na nke a kachasị bụrụ na ịzụ ahịa. Lousy ahịa ọrụ pụrụ iduga investors na-ekpe elu na akọrọ na ha n'oge ha mkpa.
Ebumnuche, ị kwesịrị ịchọ 24/7 ọrụ ndị ahịa, yana ọtụtụ nhọrọ dị ka nkata ndụ, email, ekwentị, na ụdị ịkpọtụrụ. Cheta na, ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa Forex, mkpuchi, ma ọ bụ ngwaahịa - ahịa ndị a na-arụ ọrụ na 24/7.
Yabụ, ọ bụrụ na ịdebanye aha na onye na-ere ahịa CySEC yana ndị ahịa na-enye naanị ụbọchị 5 kwa izu - ịgaghị enweta enyemaka ebe ahụ na ngwụsị izu.
Akaụntụ na Nye
Ma ị bụ onye ọhụụ ọhụụ ma ọ bụ na ị na-azụ ahịa pro, ọ dị mma ịnwe nhọrọ na ịmara ihe dị.
Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ndị na-ere ahịa CySEC na-enye Akaụntụ Islam maka ndị na-eso ụzọ okwukwe Alakụba. Emegharịrị ihe ndekọ ndị a iji hụ na ha na-asọpụrụ Iwu Sharia bụ nke megidere ọmụrụ nwa (ma akwụ ụgwọ ma ụgwọ). N'ihi ya, akụkọ ndị a anaghị akwụ ụgwọ ma ọ bụ nweta mmasị ọ bụla.
Ọ bụrụ n ’ịbụ onye na - eso ụzọ okpukperechi Alakụba ma na - agba mbọ ịchọta onye na - ere ahia - ọ bara uru ịkpọtụrụ ikpo okwu. N'ime ime nke a, ị nwere ike ịchọpụta na onye na-ere ahịa nwere ike ịnabata gị.
N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịzụ ahịa na obere ego - mgbe ahụ ị nwere ike ịchọ ịbanye n'ime obere (0.10pips), micro (0.01pips) na nano (0.001pips) akaụntụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na anaghị akpọsa akụkọ ndị a n'elu ikpo okwu, ndị na-ere ahịa CySEC kachasị mma ga-akwado obere opekempe ahia.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ịzụ ahịa akpaaka (dịka ọmụmaatụ - Forex EAs) mgbe ahụ ị ga-mkpa iji chọpụta na gị CySEC ore na-akwado-atọ ndị ọzọ nyiwe dị ka MT4. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwalite pọtụfoliyo gị site na iji nyiwe ole na ole dị iche, hụ na onye na-ere ahịa gị nwere ike ịnabata nke a.
Bido na CySEC Broker Taa
Site na nke a, ị kwesịrị ịmara ezigbo ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ndị na-ere ahịa CySEC. Ọ bụrụ na ị na-ekwenyeghị na onye na-ere ahịa kachasị mma maka mkpa gị, wee biko chọta ndepụta anyị nke ndị na-ere ahịa CySEC kachasị elu.
O sina dị, ọ bụrụ na ị na- dị njikere ịmalite, mgbe ahụ, anyị ejirila usoro ntụzi aka dị mfe nke kwesịrị ịzụ ahịa n'oge ọ bụla.
Gaba ka gị họọrọ ore ahia na-ahọrọ na-emeghe na akaụntụ. Kwesịrị ịnye ọtụtụ ozi nkeonwe na nkọwa kọntaktị. Ikwesiri igosiputa ihe omuma ahia mbu i nwere.
Nzọụkwụ 2: Mara Onye Ahịa gị (KYC)
Tupu ịmalite ike ịzụ ahịa, ịkwesịrị ịgafe usoro KYC na-ere ahịa CySEC. Dị ka iwu CySEC si dị, iwu chọrọ ka ndị ahịa niile 'mara' ndị ahịa ha. Nke a pụtara na onye na-ere ahia kwesịrị ịchọpụta njirimara nke onye ọ bụla na-azụ ahịa.
Na ore ahia ga-achọ foto gị ID (dị ka paspọtụ ma ọ bụ ikike ịnya ụgbọ ala). Ọzọ, ụlọ ọrụ ahụ ga-achọ akwụkwọ enyere na nso nso a nke gosipụtara aha na adreesị gị. Ihe atụ gụnyere ụgwọ ọrụ ma ọ bụ nkwupụta ụlọ akụ (site na ọnwa 3 gara aga).
Ikpokoro ga-edozi ozi a ma nyochaa njirimara gị tupu iziga gị ozi nkwenye. Ndị na-ere ahịa CySEC kachasị mma nwere ike ime nke a n'ime nkeji.
Ozugbo amatara gị njirimara, ị nwere ike ịga n'ihu itinye ego.
Zọ ịkwụ ụgwọ dị na ndị na-ere ahịa CySEC na-agụnyekarị ihe ndị a:
e-wallets, dị ka PayPal na Skrill
Dị ka anyị kwurula, ọ bụrụ na ị ga-ejirịrị usoro ịkwụ ụgwọ ụfọdụ wee hụ mgbe niile na nke a dị tupu ịmalite usoro ndebanye aha.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụ ahịa na ọnọdụ ahịa n'ezie mana ị kwadobeghị iji ego gị - nwalee akaụntụ ngosi! Akaụntụ ngosi na-abịa ọtụtụ ego 'akwụkwọ' maka gị iji zụọ ahịa. Nke a nwere ike ịbụ ihe ruru $ 100,000, mana ọ na-ewekarị $ 10,000.
Ihe ndekọ ngosi abụghị naanị maka ndị ahịa na-enweghị uche, ka ha dịkwa mma maka uru. Ka emechara, demo ụlọ ọrụ bụ n'ezie a ikenyeneke mbiet ụzọ nke na-anwale si ọhụrụ ego azum. Ngosi na ọnwụnwa ga - enyere gị aka ịma etu ahịa si arụ ọrụ ma nyere gị aka ịmụ etu esi agụ eserese na njirimara teknụzụ.
Ndị kacha mma CySEC Broka nke 2021
Anyị ekpuchila ihe niile dị mkpa ịtụle mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa CySEC, yanakwa ọtụtụ klaasị akụnụba a na-enye.
Ọ bụrụ na ị ka chọrọ mmụọ nsọ, wee lelee ndepụta nke kacha mma CySEC brokas ugbu a.
1. eToro - Superior Trading Broker maka Newbies
eToro bụ nhọrọ magburu onwe ya ị na-amalite n'ụwa nke ịzụ ahịa n'ịntanetị. Emebela ikpo okwu a iji nyere ndị mbido na ndị ahịa nwere ọkaibe aka, ngalaba ịkwụ ụgwọ na-akwado ọtụtụ ụzọ nkwụnye ego. Nke a gụnyere debit / kaadị akwụmụgwọ, e-wallets, na nnyefe ego. Naanị ezigbo Crypto dị na US.
eToro depụtara ọtụtụ puku akụ, gụnyere CFDs, Forex, na ọbụnadị inwe ụwa nke ebuka na cryptocurrencies. Nwekwara ike ịzụ ahịa site na ngwa ekwentị eToro ma ọ bụrụ na ị nwere ọchịchọ ịzụta na ire akụ na njem.
Na mmechi, eToro dikwa nma maka ndi ahia ohuru n’ihi na onodu ahia nke Kopi. Nke a na - enye gị ohere ịdị ka ndị ahịa nke ndị ahịa nwere ahụmahụ na - eji saịtị ahụ. Nwere ike ịhọrọ ego ole ị chọrọ itinye ego na otu onye na-azụ ahịa, eToro ga-edebe iwu gị n'otu ọkwa dabara na osisi gị.
A nakweere ụzọ dị iche iche nke ịkwụ ụgwọ
Ọ dị mma maka newbies na ntinye aka dị mfe
Capital.com bụ onye na-ere ahịa na ntanetị nke na-enye usoro ego nke ego. All n'ụdị CFDs - nke a na-ekpuchi ebuka, indices, ngwaahịa, na ọbụna cryptocurrencies. Gaghị akwụ otu penny na ọrụ, ma mgbasa na-esi ike. A na-enyekwa ụlọ ọrụ ịgbazinye ego - n'ụzọ zuru ezu na oke ESMA.
3. AVATrade - 2 x $ 200 Forex Welcome Bonuses
Dị ka aha ahụ na-egosi, EuropeFX bụ ọkachamara na-ere ahịa Forex. Site na nke ahụ, ikpo okwu na-akwado CFDs n'ụdị nke mbak, ndeksi, cryptocurrencies, na ngwaahịa. Ga-enwe ike ịzụ ahịa site na MT4, yabụ ị nwere ike ịhọrọ site na ngwanrọ desktọọpụ, ma ọ bụ ngwa mkpanaka / mbadamba.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụ ahịa site na ọkọlọtọ ihe nchọgharị weebụ gị, onye na-ere ahịa na-enyekwa ntọala nke ya - EuroTrader 2.0. N'ihe banyere ụgwọ, EuropeFX na-enye mgbasa dị oke nkpa na ụzọ abụọ. Ego gị dị mma n'oge niile, ọ bụghị opekata mpe n'ihi na enyere onye na-ere ahịa ikike ma nye ya ikikere site n'aka CySEC.
Ọbụghị naanị na CySEC nyere ikikere Plus500 kamakwa FCA, MAS, na ASIC. Ga - ahụ na ọ na - ejide ụlọ ọrụ na LSE. Site na onye na-ere ahia a, ị nwere ike ịtụ anya ọtụtụ puku ihe onwunwe. Nwere ike ịzụ ahịa ihe ọ bụla site na ngwaahịa na indices na ebuka na cryptocurrencies.
Enweghị ụlọ ọrụ azụmahịa metụtara mgbe ị na-azụ ahịa site na onye na-ere ahịa a. Nkwụnye ego pere mpe iji bido bụ £ 100, nke a dị mma maka ndị na-ebu ụzọ. Mentzọ ịkwụ ụgwọ dị bụ nnyefe ụlọ akụ, kaadị akwụmụgwọ / debit, na PayPal. Plus500 na-enye leverage, agbanyeghị, njedebe metụtara dị ka iwu ESMA. Ekwentị mkpanaka nke ngwa ahia dị na ngwaọrụ gam akporo na iOS.
E nwere ọtụtụ puku ndị na-ere ahịa na ntanetị n'ịntanetị, ha niile na-achọ ịdọta ndị na-etinye ego na nyiwe ha. Nsogbu a nwere mgbe ụfọdụ anụ ọhịa wolf na uwe atụrụ na ụlọ ọrụ ego.
Nke a bụ ya mere o ji dị mkpa naanị inyefe ego gị na njikwa azụmaahịa zuru ezu. Site na nke a, anyị pụtara otu nke na-ejide ikikere site n'aka ahụ tụkwasịrị obi dị ka CySEC. Nke a bụ naanị ụzọ ị nwere ike isi kwenye na ọnyà nchekwa megide ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-enweghị atụ.
Ndị na-ere ahịa anyị edepụtara n'elu niile nwere ikike zuru oke site n'aka CySEC ma bụrụ ndị ama ama. N’ụzọ dị oke mkpa, ịkwesịrị ịme nyocha nke gị mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa iji lekọta ọrụ gị.
Should kwesịrị ịdị na-elele usoro dị mkpa dịka mgbasa, leverage, ọrụ, na ụgwọ azụmahịa. Ihe ndị a niile ga - enyere gị aka ikpebi nke kachasị mma maka gị. Ọzọkwa, echefula uru nke itinye n'ọrụ ngosi na nnwale n'efu iji mata ebe ikpo okwu tupu i tinye ego gị tara ahụhụ.
Kedu ihe CySEC pụtara?
CySEC bu okwu achoro nke ‘Cyprus Securities And Exchange Commission’ - nke bu ngalaba n’ahu n’ime Republic of Cyprus, n’ile anya na ulo oru ego
Enwere m ike iji mbufe izipu ụlọ akụ iji debe akaụntụ m nke CySEC?
Nwere ike ị kachasị ụlọ ọrụ azụmaahịa CySEC. Mana ikwesiri ịmara na mbufe ụlọ akụ ọdịnala bụ otu n'ime usoro ịkwụ ụgwọ iji nwayọ.
Achọrọ m paspọtụ iji mepee akaụntụ ndị na-ere ahịa CySEC?
Chọrọ ụdị foto ID, ọtụtụ nyiwe chọrọ ma paspọtụ ma ọ bụ ikike ịnya ụgbọ ala. N'elu nke ahụ, ị ​​ga-eziga otu akwụkwọ akwụkwọ gọọmentị dịka ụgwọ ọrụ (site na ọnwa 3 gara aga).
Ọ bụrụ na onye na-ere ahịa CySEC m dara, m ga-efufu ego m niile?
Ee e, ọ bụrụhaala na ị na-eji onye na-ere ahịa ahazi, dịka onye na-ere ahịa CySEC, mgbe ahụ ego gị ga - abụ ihe nchekwa (ihe ruru 20k ma ọ bụ 90% nke akaụntụ gị - nke ọ bụla pere mpe)
Kedu ihe bụ kacha mma ahịa CySEC maka ndị mbido
Onye na-ere ahịa CySEC kachasị mma maka ịzụ ahịa ọhụrụ nwere ike ịbụ Libertex. Nke a bụ n'ihi na ikpo okwu dị mfe ịnyagharịa ma na-enye gị ohere ịzụ ahịa na obere obere.